नसर्ने – Page3– Health Post Nepal
मुटुरोगसम्बन्धी हाम्रो देशमा सामाजिक जागरण एकदमै आवश्यक भएकाले यी विषयमा जानकारी लिनु र दिनु अति नै आवश्यक छ । हृदयाघातबाट हुने मृत्यु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले सबैजनाले यो रोगको सिकार हुनबाट आफूलाई र अरुलाई पनि बचाउन अति नै जरुरी छ...
के हो डिप्रेसन ? मन कमजोर हुने अवस्थालाई डिप्रेसन भनिन्छ । मानसिकरोगका २ प्रकार– कडाखालको मानसिकरोग र सामान्यखालको मानसिकरोगमध्ये डिप्रेसनलाई सामान्यखाले मानसिकरोगमा लिइन्छ । डिप्रेसनपश्चात् मानिसको अधिकांश समय मनमा खिन्नता हुने गर्छ । मानिसलाई यतिवेला उदास तथा दिक्क लागेको...
ठूलो मानिसमा जस्तै बच्चामा पनि दमको समस्या देखापर्छ । नेपालमा बच्चाको श्वास–प्रश्वास प्रणालीमा समस्या देखिएमा निमोनिया नै भयो भन्ने प्रचलन छ, तर यथार्थ त्यो होइन । बच्चामा देखिएको श्वास–प्रश्वास समस्या दम पनि हुन सक्छ । नेपालमा बालदमले भयावह रूप...
फोक्सो वा श्वासनलीमा आएको संकुचनका कारण श्वास–प्रश्वासमा आएको कठिनाइलाई दम भनिन्छ । यो एक दीर्घरोग हो । अक्सिजनको मात्रा रगतभित्र पस्नमा कठिनाइ हुँदा दमरोगले च्याप्ने गर्छ । दम रोगभन्दा पनि रोगहरूको लक्षण हो । यसले श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी अंगहरूमा आक्रमण गर्छ...
आज विश्व मधुमेह दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । करिब ९० प्रतिशतमा खराब आचारका कारण मधुमेह लाग्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । चिकित्सकका अनुसार मधुमेहले असर नगर्ने शरीरको कुनै पनि अंग छैन । यस सन्दर्भमा मधुमेहका प्रमुख...
परिचय रगतमा चिनीको मात्रा सामान्यभन्दा बढ्नुलाई मधुमेह अथवा चिनीरोग भन्ने गरिन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने भएकाले यसलाई चिनीरोग भनिएको हो । मधुमेह सामान्य रूपमा ३ प्रकारका हुने भए पनि यसलाई ४ प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । तर, सामान्य...
थाइराइडको पहिचान र रोकथाम कसरी गर्ने ?
थाइराइड मानव शरीरमा हुने एक ग्रन्थि हो । यसले थाइरोक्सिन हर्माेन उत्पादन गर्छ । थाइराइड ग्रन्थिले टी३ र टी४ नामक हर्माेन उत्पादन गर्छ । शरीरमा मेटाबोलिजम अर्थात् खानालाई शक्तिमा परिणत गर्न थाइरोक्सिन हर्माेनको आवश्यकता पर्छ । थाइराइड ग्रन्थिमा समस्या...